Isimo sezulu sase-Australia: izici, izinkathi zonyaka, izinga lokushisa kanye namadolobha | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isimo sezulu sase-Australia
IsiJalimane Portillo | 18/10/2021 19:00 | Isimo Sezulu
I-Australia ibhekwa njengepharadesi elihle elibalele, ngoba cishe yonke indawo ijabulela izinsuku ezishisayo unyaka wonke. Sikhuluma ngezwe elinamabhishi amahle kakhulu emhlabeni. I- Isimo sezulu sase-Australia Kubalulekile kulabo abafuna ukuyofunda phesheya noma bathuthele emsebenzini.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela konke odinga ukukwazi ngesimo sezulu sase-Australia kanye nezingxenye zaso ezihlukile.
1 Isimo sezulu sase-Australia
2 Izinkathi Zonyaka
3 Isimo sezulu sase-Australia emadolobheni amakhulu
3.2 Isimo sezulu e Melbourne
3.3 I-Gold Coast
Isimo sezulu sase-Australia singachazwa njengesifudumele futhi sipholile, kepha njengezwe elikhulu, amadolobha alo angahlangabezana nezinhlobo zezulu ezahlukahlukene. Kufanele wazi ukuthi insimu yase-Australia yamukela amahora angaphezu kwama-3000 ngonyaka wokukhanya kwelanga, ngakho-ke, indawo enhle kakhulu yolwandle.
Futhi, ikhalenda lase-Australia lihlukaniswe isimo sezulu esomile nesimo sezulu esimanzi. Kunemvula eningi kusuka ngoNovemba kuya kuMashi, kodwa kunezinsuku ezimbalwa zemvula kusuka ngo-Ephreli kuya ku-Okthoba, futhi isimo sezulu sase-Australia siba somile kakhulu.
Ngenxa yokuthi itholakala eningizimu yezwe, izinkathi zonyaka e-Australia ziphambene nalezo zaseYurophu: uma eYurophu kusebusika, e-Australia kusehlobo; Uma abantu base-Australia bejabulela intwasahlobo, abaseYurophu balungiselela ukuwa.
Ihlobo lisukela kuZibandlela kuya kuNhlolanja, lapho Isimo sezulu sase-Australia siphakathi kuka-19 ° C no-30 ° C (Usuku olushisa kakhulu); Njengoba sishilo ekuqaleni, lokhu kuyehluka kuye ngedolobha lakho, enyakatho, uzothola amazinga okushisa aphezulu kakhulu, kepha eningizimu, uzothola amazinga okushisa aphansi kancane.
Isimo sezulu sase-Australia sibalungele kakhulu abathandi basolwandle, njengoba kunamathuba okuntweza, ukubhukuda, ukushukisa, nokujabulela yonke imisebenzi yangaphandle enikezwa yinsimu yase-Australia. Kunezinto eziningi ongazibona nokuzenza e-Australia, yingakho ihlobo lingesinye sezikhathi ezihamba phambili zokuhamba.
Ukuwa kusuka ngoMashi kuya kuMeyi; Ngalezi zinsuku, isimo sezulu sase-Australia siyashintsha phakathi kuka-14 ° C no-28 ° C, okusho ukuthi izinsuku ezifudumele emini nobusuku obupholile, zilungele ukujabulela impilo yasebusuku enganikezwa yi-Australia nabantu bayo kuphela.
Ngalesi sikhathi, amabhishi nokuntweza phezu kwamanzi nakho kuyindlela yosuku, futhi izinga lokushisa likulungele kakhulu ukuchitha usuku ngaphandleKodwa akungabazeki ukuthi enye yezindawo ezikhanga kakhulu ekwindla ngumkhosi wamalambu okhanyisa iSydney.
Phakathi kukaJuni no-Agasti, ekwindla kudlulela ebusika, kanti isimo sezulu sase-Australia sehla ngama-degree ambalwa, sihluka phakathi kuka-6 ° C no-22 ° C kuye ngesifunda. Kubantu base-Australia, ubusika bungaba nzima, kepha uma kuqhathaniswa namanye amazwe, ubusika base-Australia bumnandi impela.
Ngalesi sikhathi, ungahlala ujabulela izinsuku ezimbalwa ezibalele olwandle, noma uphume uyohlola imidwebo neminyuziyamu ngobusuku obupholile., kuyilapho abathandi bezemidlalo ebusika benethuba lokuyokushushuluza ezintabeni. Njengoba ukwazi ukubona, kulokhu, kunezinto ezithile okufanele uzenze, ngakho-ke awusoze waba nesithukuthezi.
Okokugcina, kuyintwasahlobo NgoSepthemba kuya kuNovemba, kanti isimo sezulu sase-Australia siphakathi kuka-11 ° C no-24 ° C; ngenxa yalesi sizathu, abantu abaningi base-Australia babheka intwasahlobo njengehlobo lesibili. Futhi bashiya ikhaya bayojabulela ilanga futhi bahlanganyele emisebenzini eminingi yangaphandle.
Ngalesi sikhathi, ibhishi ligcwele abagibeli abakhumula izingubo zabo ezimanzi bagqoke izingubo zabo zokubhukuda, amathala wezindawo zokudlela nezindawo zokudlela ezinhle agcwele abantu, futhi imigwaqo igcwele impilo futhi kumnandi, ngoba wonke umuntu ufuna ukujabulela imibala kanye izinto ezinhle. Amandla amasha alethwe iphunga nentwasahlobo.
Isimo sezulu sase-Australia emadolobheni amakhulu
Isimo sezulu saleli dolobha lase-Australia siyashintsha ngezinkathi zonyaka. Imvamisa, izinga lokushisa eSydney lihluka phakathi kuka-8 ° C (Julayi 19 usuku olubanda kunazo zonke onyakeni) kanye no-27 ° C (Januwari 25 usuku olushisa kakhulu onyakeni).
Ngokuvamile, isimo sezulu saleli dolobha elikhulu lase-Australia sibonakala ngokukhanya kwelanga okukhanyayo emini nasebusuku obupholile. Eqinisweni, kuyabanda kancane ekwindla nasebusika, kepha isimo sezulu asikaze sibande kangangoba kufanele uhlale endlini. AbakwaSydney bakumema ukuthi uzokujabulela ukuphuma ngaphandle. Izinsuku zokuntweza, ukosa inyama nokuvakashela itheku, i-opera nepaki yemvelo ebhishi seziseduze.
Isimo sezulu e Melbourne
Isimo sezulu saseMelbourne sibanda kancane kunesaseSydney, kepha sisajabulisa kakhulu. Isimo sezulu saleli dolobha e-Australia imvamisa siyahlukahluka phakathi kuka-6 ° C (Julayi 23 usuku olubanda kunazo zonke onyakeni) kanye no-26 ° C (UFebruwari 3 usuku olushisa kakhulu onyakeni).
ISydney inendawo eyingqayizivele yolwandle, kanti iMelbourne yaziwa ngomkhathi wayo waseYurophu namasiko. Ukunambitheka, iphunga, ubuciko nomculo kugcwala ezitaladini zaleli dolobha, futhi ungazijabulela nganoma yisiphi isikhathi sonyaka.
Isibonelo, ukuba nepikinikini olwandle noma epaki, uhamba uye eRoyal Botanic Gardens, uvakashele iminyuziyamu eminingi edolobheni futhi ubabaze ubuhle obuhle kakhulu kuyingxenye encane yakho konke ongakubona nokwenzayo eMelbourne.
Uma uthanda izinsuku ezishisayo, iGold Coast nezindawo zayo ezikhangayo zikulungele. Isimo sezulu kuleli kona elinelanga lase-Australia sisukela ku-10 ° C (Julayi 29 usuku olubanda kakhulu lonyaka) kuya ku-28 ° C (Januwari 27 usuku olushisa kakhulu onyakeni).
Kuyiqiniso ukuthi isimo sezulu se- «Miami Australia» sinamandla kakhulu ehlobo, kepha phakathi nonyaka wonke ungajabulela umoya opholile, ekumema ukuba ujabulele umoya omnandi wedolobha nesihlabathi segolide. Vele, eGold Coast, ngaphezu kwamabhishi, kunezindawo eziningi okufanele uzibonele. Ngesikhathi sokuhlala kwakho, ungajabulela amapaki emvelo nezindawo zokugcina izilwane zasendle.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngesimo sezulu sase-Australia kanye nezici zaso.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Isimo Sezulu » Isimo sezulu sase-Australia